အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုပြောနေတာပါ။ကွင်းပြင်တွေဟာလူသိအများဆုံးနဲ့ဘရောက်ဇာဂိမ်းဖွံ့ဖြိုးမှုရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပါ။ သင်သည်သူတို့၏နာမကိုမသိရပါဘူးရင်တောင်,သင်သည်သူတို့၏လိုဂိုကိုသေချာသိ. သင်သည်ကြီးစွာသောအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားရှေ့၌သင်တို့မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာကြောင်းအကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မသိခဲ့ကြတာကဖန်တီးသူတွေဟာဒီကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ဘရောက်ဆာဂိမ်းတွေဖန်တီးပုံနဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးကိုသင်ယူခဲ့ကြလို့ပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲလာပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်အွန်လိုင်းလိင်ဂိမ်းလောကမှာပါ။ လူကြီးဂိမ်းအမျိုးအစားသစ်စတင်ခဲ့ပုံပါ။, တကယ်တော့ခေတ်ရေစီးကြောင်းကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးညစ်ညမ်းဂိမ်းတွေနဲ့ရောထွေးခံရဖို့မ. ဒါတွေဟာကွင်းပြင်အသစ်မှအကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်မှုနဲ့တူတဲ့အရွယ်ရောက်ဂိမ်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာတီထွင်ထားတာပါ။
ဤတွင်မလှုပ်မရှားသောဂိမ်းများရှိသည်။ အဆိုပါမီးဂိမ်းများအတိတ်က၏အရာဖြစ်ကြ၏. ကျနော်တို့လှုပ်ရှားမှု,ဂရပ်ဖစ်နှင့်အသံများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ထိပ်တန်းထစ်အင်ဂျင်၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်နောက်ဆုံးပေါ်ထ်5 ဂိမ်းများနှင့်အတူလာ. ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းဒီအစုအဝေး၌ရှိသမျှသောအဓိကအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ဂိမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းရန်သေချာစေတော်မူ၏။ လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း(သို့)လိင်ဆက်ဆံခြင်း), သင်ချင်တယ်ဆိုပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိသမျှသောဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်,ဆိုက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာမပါဘဲနှင့်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖွင့်ပေးခြင်းမရှိဘဲ.
စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီမှာစိတ်ကူးပုံဖမ်းနည်းအတုကိုဂိမ်းလောကကနှစ်သက်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးဂိမ်းထဲကလူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားတွေနဲ့တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးအစားတွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက်အသီးအသီးများနှင့်အသီးအမျိုးအစားများအတွက်ဂိမ်းများကိုရှာဖွေ,သင်ရတဲ့သောစုဆောင်းခြင်းသင်နှင့်အတူစမ်းသပ်ချင်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွန့်စားမှုမဆိုအမျိုးအစားစိတ်တော်နိုင်သည်ကိုသေချာအောင်.
ဆိုဒ်မှာအမျိုးသမီးအမျိုးအစားကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုလမ်းလွဲဖို့သုံးနိုင်တဲ့တွဲဆိုင်းတွေဒါဇင်ချီရှိပါတယ်။ သင့်ရည်းစားအတွေ့အကြုံကိုပေးမယ့်ဒိုင်လူကြီးတွေရှိတယ်၊အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာသင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဂရုစိုက်မယ်၊ပြီးတော့သင့်လိင်ကျေးကျွန်တွေအတွက်စိတ်ဆန္ဒအားလုံးကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများတွင်သင်မှုတ်၏သူငယ်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်.အမှုအရာပြောင်းပါ,ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ပတ်သက်., အခြားဂိမ်းများကိုသင်အပိုယုတ်အင်္ဂါရပ်များအမျိုးမျိုးသော့ဖွင့်ဖို့သင့်ရဲ့ရုပ်ပုံ(သို့)အမျိုးမျိုးသောဇာတ်ကောင်တက်အဆင့်ရပါလိမ့်မယ်.
သင်ဟာကစားလို့ရတဲ့လိင်မြင်ကွင်းတွေထက်ဇာတ်လမ်းကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဆင်တူတွဲကစားတာတွေ၊ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းတွေ၊ဂရပ်ဖစ်ဝတ္ထုတစ်ခုလိုပိုခံစားရတဲ့စာသားအခြေခံတဲ့ဂိမ်းတွေတောင်ပါ။ဇာတ်လမ်းထဲဆွဲသွင်းပြီးအဓိကဇာတ်ကောင်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားစေဖို့ပါ။ ချိန်းတွေ့ချိန်တွေမှာအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုထူးကဲစွာကောင်းမွန်စွာရေးသားထားပြီးသူတို့ရဲ့စတိုင်၊စရိုက်နဲ့စရိုက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်တဲ့လက်တွေ့ကျကျဆွေးနွေးမှုတွေပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ညစ်ညမ်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကညစ်ညမ်းတဲ့စကားကိုအမြဲပြောပြီးအငြင်းအခုံလုပ်တယ်။ သူမသည်ပင်ဖြစ်သင့်တဲ့မိန်းကလေးကဲ့သို့သင်တို့ဝိုင်းကြလိမ့်မည်။, ကျောင်းကမိန်းကလေးတွေပိုပြီးအပြစ်မဲ့ပြုမူခြင်းနှင့်ရရန်ခဲယဉ်းကစားပါလိမ့်မယ်နေစဉ်။
မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောခဲ့သလိုကျွန်မတို့ဆိုက်မှာအမာခံလိင်တူချစ်သူလူကြီးဂိမ်းတွေလည်းလာကြတယ်။ သင့်ဆန္ဒအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ့်သကြားလုံးတွေ၊ လိင်တူဂိမ်းအမျိုးအစားထဲမှာဆိုရင်ချိန်းတွေ့တာတွေတောင်ရှိတယ်။ အမျိုးသားချင်းချစ်သူတွေဟာအမျိုးသားချင်းချစ်သူတွေနဲ့အမျိုးသားချင်းချစ်သူတွေကိုအရမ်းတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။လိင်တူချင်းချိန်းတွေ့ခြင်းဘဝဟာအိပ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေအဖြစ်များစွာသောလူစွမ်းကောင်းတွေနဲ့ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေပါဝင်တဲ့လူကြီးတွေဂိမ်းကစားနည်းတွေနဲ့တောင်လာကြပါတယ်။ခင်ဗျားမှာရှိလောက်တဲ့အရိုင်းဆန်တဲ့စိတ်ကူးတွေထဲကနှစ်သက်စရာအကောင်းဆုံးပေါ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်အများဆုံးကစားသည့်အမျိုးအစားတစ်ခုမှာကစားနည်းဂိမ်းများဖြင့်လာသောအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်တွင်တင်ဆက်သမျှသောရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရူးသွပ်များမှာ. ကျနော်တို့နောက်ဆုံးလေကြောင်းရန်ဘင်ဂိုကစား၏နောက်ဆုံးအပိုင်းအစများနှင့်ပင်ဇာတ်ကောင်နှင့်အတူရုပ်ပြောင်ဂိမ်းရှိသည်။ အဘယ်သို့ထင်? ဆူ(လ်)ဘီ(လ်)နှင့်(လ်)ဘီ(လ်)တို့တွင်နဂါးဘောလုံးဇစ်(လ်)ဇာတ်ကောင်များ၏ပရိသတ်များသည်ဆူ(လ်)လူမျိုးတို့၏ပုန်းအောင်းနေခြင်းကိုခံစားနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
သင်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားလိုတဲ့အခါ,သင့်ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်အတူအစဉ်အမြဲရှုပ်ထွေးတက်လိမ့်မည်ဟုအရာနှစ်ခုရှိပါတယ်. ပထမဆုံးအနေနဲ့အခမဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့ဆိုဒ်များစွာနဲ့သင့်လမ်းကိုပစ်ပယ်ထားတဲ့ပေါ်လစီရှိပါတယ်။ အဲဒီနောက်ကလစ်နှိပ်ပြီးကလစ်နှိပ်ပါတယ်၊ပန်ကာနာရီကျော်လိုဂိမ်းတွေကိုမြှင့်တင်ရုံတင်မကဘဲပန်ကာဆွဲတဲ့အနုပညာပြခန်း၊အခြားဇာတ်ကောင်တွေနဲ့တင်ဆက်ဖို့ပါ။ သို့သော်အသစ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအမှုတစုံတခုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. ကျနော်တို့ကဒီမှာပူဇော်သက္ကာဘို့နေသောစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည် 100%အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုချက်ကိုထက်အခြား,သင့်ထံမှတစုံတခုကိုမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် 18 အသက်အနှစ်.
အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအားလုံးကိုဘရောက်ဇာထဲတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့အရစ်ကျနဲ့ကစားနိုင်မှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းမွန်စွာစံကိုက်ညှိထားသောဘရောက်ဇာကိရိယာများကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှန်ကန်သည့်ဂိမ်းကိုရှာဖွေရန်သုံးပါ၊၎င်းကိုတွေ့သည်နှင့်ကစားခလုတ်ကိုထိပါ၊၎င်းကိုခံစားရန်အသင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ရုံအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်သင်သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်. သင့်ဘရောက်ဇာတွင်မည်သည့်တိုးချဲ့မှုမျိုးကိုထည့်သွင်းရန်ပင်မလိုအပ်ပါ၊ဤဂိမ်းများသည်ဖလက်ရှမီးဂိမ်းများမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နယူးထ်5 ဂိမ်းများသည်မည်သည့်ဘရောက်ဇာနှင့်မည်သည့်ကိရိယာနှင့်မဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အခုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အစိတ်အပိုင်းအတွက်. ဘယ်လိုကျနော်တို့အခမဲ့သမျှသောဤဂိမ်းများကိုပူဇော်နိုင်ကြသည်လာ. ကောင်းစွာ,ငါတို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်စမတ်ငွေကြေးနှင့်ဆိုင်တဲ့ကိုအသုံးပြုဖို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ထိုသို့ပြု. ဂိမ်းအတွင်းမှာပေါ့ပ်ဆက်တွေ၊စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုကြော်ငြာတွေကိုရူးသွပ်မယ့်အစားကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ညစ်ညမ်းပြွန်ကနေသိတဲ့ကြော်ငြာအမျိုးအစားကိုပဲသုံးပါတယ်။ ဂိမ်းကိုသင်တစ်ခုတည်းကြော်ငြာမြင်ရပါလိမ့်မည်ဝန်နေစဉ်နှင့်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းစာမျက်နှာအတွင်းနှစ်ဖက်နှင့်ခြေရင်းအတွက်နှစ်ဦးထက်ပိုတည်ငြိမ်နဖူးစည်းစာတမ်းတွေရှိပါတယ်. အခမဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။, ထိုသူအပေါင်းတို့နှင့်ပတ်သက်.အကောင်းဆုံးအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကို၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာရန်သင့်အားမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ. ကိုယ့်သင်အကြိုက်ဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်လွှင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တူ,သင်တို့သည်ငါတို့၏စုဆောင်းမှုကိုခံစားရန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. တဖန်သင်တို့အခမဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုရှိရာဆိုက်များနှင့်မတူဘဲ,ငါတို့သည်သင်တို့ဂိမ်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ကြကုန်အံ့,မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲဧည့်သည်အဖြစ်ဖိုရမ်အတွက်သူတို့ကိုနှင့်ပို့စ်မက်ဆေ့ခ်ျများနှုန်းထား. ယနေ့ညအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ဂိမ်းများကိုအခမဲ့ဂိမ်းကစားခြင်းခံစားကြည့်ပါနှင့်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုအားလုံးကျေးဇူးပြုပြီး.
လူကြီးဂိမ်းအသစ်များတွင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏အရည်အသွေးသည်အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးကဲ့သို့မြင့်မားသည်။ ပထမဦးဆုံး,သင်သိပ်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဂိမ်းတွေကိုကြည့်. အကြံပြုခေါင်းစဉ်နှင့်ဖော်ပြချက်များမှတပါး,ခပ်သိမ်းသောဂိမ်းသင်အရေးယူအတွင်းသွားရဲ့အဘယ်အရာ၏စိတ်ကူးတစ်ခုပေးမည်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့နမူနာပုံရိပ်နှင့်အတူပေးအပ်သည်. ငါတို့သည်လည်းသင်မှတ်ချက်များထားခဲ့ဖို့အခွင့်အလမ်းပေး,ဒီဆိုက်ပေါ်တွင်ရပ်ရွာအတွေ့အကြုံခြုံငုံပျော်စရာမှပံ့ပိုးသောကြောင့်,. ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးလိုက်စဉ်လိုက်ပူဇော်သောကြောင့်,ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားအကြောင်းအရာနှုန်းကိုမျှော်လင့်,အရာထိပ်ပေါ်မှာအလွန်အကောင်းဆုံးဂိမ်းသွင်းထားမည်., ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်အချို့သောကြော်ငြာတွေရှိပါတယ်,ဒါပေမယ့်ရှေ့တော်၌ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်,သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှသင့်ရဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်လိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့အရွယ်ရောက်ဂိမ်းဆိုက်၏နောက်ဆုံးဖြည့်စွက်အသစ်တင်ထားသောအပိုင်းတွင်တင်ဆက်ထားပါသည်. အခြားကဏ္ဍများကိုသင်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်အခြေခံပြီးစုဆောင်းမှုကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ပါလိမ့်မယ်,ဂိမ်းအချိန်,နှင့်အမျိုးအစား. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း၏ကြီးမားသောအများစုဂိမ်း၏တစ်နာရီကျော်ပါဝင်ကြပြီးသူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကျော်ကြီးမားသောပြန်ကန်တန်ဖိုးနှင့်အတူလာ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းတစ်တစ်တန်ရှိပါတယ်. သငျသညျတစျခုလုံးကိုတစ်နှစ်တိုင်းတစ်ခုတည်းတစ်လနေ့စဉ်ဂိမ်းကစားလိုလျှင်,သင်ဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်တွင်ကျန်ကြွင်းသောအရာတစ်ခုခုရှိသည်လိမ့်မယ်. အရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်. ဤမီးဂိမ်းမဟုတ်ခုနှစ်မှစ.,အရာအားလုံးမိုဘိုင်းအပေါ်ကြီးစွာအလုပ်လုပ်တယ်., ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုလည်းလုံးဝလုံခြုံ.
ဤသည်အဆုံးစွန်သောညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အဆုံးစွန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းစုဆောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့်တွစ်တာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဘလော့ဂ်မှတစ်ဆင့်မြေအောက်အဆင့်ဖိုရမ်များကိုကွင်းပြင်မှလူကြီးများဂိမ်းများကိုအကြံပြုနေသည်။ သင်သည်ဤဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းတွေနဲ့မှားသွားဘယ်တော့မှမနိုင်. ဒါဟာသင်မဆုံးရှုံးနိုင်မယ့်အလောင်းအစားရဲ့.